प्रधानमन्त्री ओलीलाई इटहरीका मेयर चौधरीको चेतावनी (भिडियो सहित) - Pradesh Dainik
प्रधानमन्त्री ओलीलाई इटहरीका मेयर चौधरीको चेतावनी (भिडियो सहित)
पथरी, पछिल्लो समय चर्चाको शिखरमा रहेका इटहरी उपमहानगरका मेयर द्वारिकलाल चौधरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै चुनौती दिएका छन् । विहिबार भ्रष्ट्राचार विरुद्धको अभियानलाई सम्बोधन गर्न मोरङको पथरी बजार आएका चौधरीले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
सुखि नेपाली समृद्ध नेपाल भनेर भाषणमा मात्रै सिमित राखेर केही हुँदैन । भ्रष्ट्राचार निर्मूल पार्नुपर्छ भन्दै चौधरीले थपे “प्रधानमन्त्री ज्यू तपाइले लिनुभएको प्रतिज्ञा सधैँ रहन्छ की रहँदैन ? तपाइ भिष्म पितामह जस्तो हो की होइन ?” चौधरीले यसो भनिरहँदा प्रधान मन्त्री ओलीले उद्घोष गरेको भ्रष्ट्राचारमा शुन्य सहनशिलताको सिद्धान्तले कतिको काम गरेको छ ? भनेर व्यङ्ग्य गरेको समेत बुझिन्छ ।
पछिल्लो समय चर्चामा रहेका चौधरी आफ्नै नगरको एउटा कार्यक्रममा र..डी (अपशब्द) जिन्दावाद भन्दै भाषण गरेपछि चर्को विवादमा फसेका थिए । त्यसको केही दिनमा नै विज्ञप्ती मार्फत उनले माफी मागेका थिए ।
पथरीको कार्यक्रममा पथरीशनिश्चरे नगर उपप्रमुख यमुना विष्ट बास्तोला, स्थानीय समाजसेवी युवराज बास्कोटा, नेपाल जेसिज पूर्व उपाध्यक्ष मञ्जरी घिमिरे, इटहरीका भष्ट्राचार बिरोधी अभियान्ता भविन थापा लागएतले चौधरीको अभियानमा साथ रहेको भन्दै आफ्ना विचारहरु राखेका थिए ।
पथरीको कार्यक्रम पिस ल्याम्प इन्टरनेस्नलले आयोजना गरेको हो ।